Rebranding: Sei Kumbundira Shanduko Kuchakura Yako Kambani Brand | Martech Zone
Zvinoenda pasina kutaura kuti rebranding inogona kuburitsa mibairo yakanaka yebhizinesi. Uye iwe unoziva kuti ichi ichokwadi kana iwo makambani ane hunyanzvi mukugadzira mabhureki ari iwo ekutanga kuita rebrand.
Vanosvika makumi mashanu nesere muzana muzana emasangano ari kugadziridza senzira yekusimudzira kukura kuburikidza neCOVID denda.
We at Lemon.io wakambozvionera wega kuti ingani rebranding uye inowirirana brand inomiririra inogona kukuisa iwe pamberi pemakwikwi ako. Nekudaro, isu takadzidzawo nenzira yakaoma kuti nyore senge rebranding inganzwika, zvinopfuura kungogadzira logo nyowani kana kuwana zita idzva. Pane kudaro, inzira inoenderera mberi yekugadzira nekuchengetedza chitupa chitsva - uchigara uchiendesa meseji yaunoda kuti vatengi vako vabatane nemhando yako.
Chimiro chakanaka pamapuratifomu ese anowedzera zvakanyanya mari yesangano inosvika makumi maviri nematatu muzana.
LucidPress, Iyo State of Brand Consistency
Uye izvi ndezvekutaura zvishoma. Muchinyorwa ichi chipfupi uye chakanangana, isu tichakufambisa iwe kuburikidza nekuita rebranding maitiro, kugovera matipi, kuratidza akajairika misungo, uye kukuratidza maitiro ekuanzvenga.
Iyo Lemon.io Rebrand Nyaya
Zvinongotora masekonzi manomwe kuita yakasimba yekutanga fungidziro.
Izvi zvinoreva kuti masekonzi manomwe anogona kunge ari ega aunofanira kugonesa munhu angangoita mutengi kuti asarudze iwe pamusoro pemakwikwi ako. Kunyange ichi chiri chipingamupinyi chiri pachezvayo, kuramba uchinyengetedza vatengi kuti varambe vachikusarudza zvakatooma. Kuziva uku kwatisvitsa mubudiriro yatiri kupinda mairi nhasi.
Rega ndikuregedze muchidimbu munhoroondo yelemon.io.
Lemon.io yakatanga kugadzirwa muna 2015 apo muvambi (Aleksandr Volodarsky) akaziva gaka mune yemahara yekuhaya niche. Panguva iyoyo, kuisa chiratidzo ndicho chinhu chekupedzisira mupfungwa dzedu. Kufanana nemabhizinesi mazhinji matsva, takakanganisa pakutanga kwerwendo rwedu, imwe yaive yekuzvipa zita rekuti "Coding Ninjas." Nditendei, zvainzwika panguva iyoyo nekuti zvaive zvakajairika, uye isu takanga taisa tarisiro yedu pakugadzira zvemukati.
Nekudaro, isu takamuka zvisina tsarukano patakaona kuti kukura kwebhizinesi kwaive kwadzikira uye zvega zvega zvaive zvisati zvave pedyo nekuve zvakakwana mukubudirira kwebhizinesi redu. Taida zvakawanda kupfuura izvozvo kuti tiite munyika inokwikwidza yemahara yekuhaya. Apa ndipo pakatanga nyaya yedu yerebranding.
Pane zvakawanda zvezvidzidzo zvinonakidza zvatakadzidza murwendo rwedu rwekudzokorodza, uye tinovimba kuti, patinenge tichirondedzera nyaya yedu, unogonawo kutora zvishoma zvichabatsira rudzi rwako.
Nei Rebrand Yaidiwa
Unogona kunge uchinetseka kuti sei taifanira kudzoreredza uye nezvekukosha kwakadii.
Zvakanaka, kunze kwekuti isu takanga tapfuura nguva yeNinjas neRockstars uye takagovana zita rekare-rinonzwika nechikoro chepurogiramu muIndia, takaonawo kuti taifanira kuve takasimba kuti tirarame mumusika unokwikwidza wakasununguka. Iyo niche yevetted freelance misika yakabatikana zvekuti nzira chete yekumira kunze kuve neiyo yakasimba uye ine stellar brand.
Pakutanga, taitenda kuti kutadza kwedu kwakakonzerwa nekugadzirwa kwedu, uye takakurumidza netsoka dzedu kuenda kune mugadziri uye tikamukumbira kuti agadzirisezve bhurogu, iyo yaakaramba zvine ruremekedzo ndokukurudzira kuti igadziriswe zvachose. Ndiyo yaive mbambo yekupedzisira mubhokisi, uye panguva iyoyo, kudiwa kwekuchinja zvakare kwakava pachena. Muchokwadi, takaona kuti isu takanga tisina brand zvachose, uye nekudaro, taifanira kugadzira imwe. Ichi chinoramba chiri chimwe chezvisarudzo zvakashinga uye zvinopa mubayiro zvatakamboita sesangano.
Kudzidza kubva kuLemon.io
Heino nhanho-ne-nhanho snippet yemabatiro atakaita iyo rebranding process. Nhungamiro dzedu hadziperi; zvisinei, tichava nerupo sezvinobvira neruzivo kubva muruzivo rwedu. Heino pfupiso yematanho atakatevera:
Isu takagadzira brand persona uye brand mascot - Hukama huri pakati pevaviri hwakaita seizvi: Yako brand persona ndiye hunhu hukuru wenyaya yako, aizosangana nezvipingamupinyi munzira yekuenda kuchinangwa chavo. Iyo brand mascot ndeye yaizovabatsira kukunda matambudziko ese uye pakupedzisira kuzadzisa zvinangwa zvavo. Muchidimbu, brand persona inomiririra vateereri vedu kana vatengi, uye mascot inotimiririra isu tine chinangwa chekugadzirisa matambudziko avo.
Tauya nemepu yeBrand Persona's Buying Decision (BPBD). - Mepu yeBPBD ndiyo rondedzero yezvikonzero zvingamanikidza vateereri vedu kutenga chimwe chinhu kubva kwatiri uye nezvikonzero zvinoita kuti vasadaro. Izvi zvakatibatsira kunzwisisa sarudzo dzekutenga dzemhando yedu yemhando uye kuziva kuti ndeapi maitiro angangozvisiya. Maitirwo acho aisanganisira kunyora zvikonzero nei kana kuti nei vateereri vedu vasingazotenge kubva kwatiri.
A brand essence matrix -Iyi yaive yerudzi rwedu yekukwirisa iyo yaiverengera zvese sei uye maitiro ehupenyu hwebhizinesi redu. Inoratidza izvo bhizinesi redu rinoita uye kutaurirana tsika dzedu dzemhando.
Brand Nhau -Iyo mhando yenyaya yakatitungamira kune iyo yakanyatso kudoma zita, iyo yatakazotora.
Mabhenefiti asingabatike ekuchinja mazita anosanganisira kuti zvakatiunzira chivimbo, kurudziro, pfungwa yezvinoreva uye chinangwa, tisingarevi nezvekuuya kunokwezva kwevanotungamira.
Uye, hongu, chinonyanya kukosha mhedzisiro iyo rebranding yaive nayo pazasi. Nzira yakanakisa yekutaura izvi kuburikidza nenhamba nekuti nhamba hadzinyepi.
Mhedzisiro yacho yaive yakakura uye yakaona isu tichisvika ingangoita 60% yehuwandu hwetraffic benchmark yakawanikwa mumakore mashanu apfuura mukati memwedzi gumi yekutanga Lemon.io brand yedu.
A rebrand yakazara yakaona isu tichifamba kubva ku4K vashanyi kuenda ku20K paavhareji pamwedzi wedu wakanaka. Takasvika pakuwedzera kunoshamisa kakapetwa ka5 kune vashanyi vedu uye kutengesa kunotiisa munzira ye10M GMV muna 2021. Tarisa izvi zvinomiririra zvekukura uku:
Pamberi: Coding Ninjas traffic kubva pakutanga kwekambani uye kusvika pakugadzirisa zvakare:
Mushure: Kufambira mberi kwakaitwa mukati memwedzi mipfumbamwe yekugadzira patsva.
Ndeipi yaunofanira kuita rebrand kana iwe uri wekutanga (zvichibva pane Lemon.io chiitiko)?
Nguva ndizvo zvese. Kugadzira patsva kunoda basa rakawanda uye kunodya zviwanikwa zvakawanda, uye zvakakosha kuita sarudzo dzakaverengerwa.
Ndeipi nguva yakakwana yekugadzira rebranding?
PaLemon.io, takaziva kuti yaive nguva yekuchinja chimiro chekambani yesangano redu apo:
Zvaisashanda! Kururamisa kwedu kukuru kwekugadzirazve rebrand kwaive kuona kuti mhando yedu yazvino yanga isiri kuunza mhedzisiro yaidiwa. Kwatiri, yaive traffic shoma yataigamuchira pasi pe "Coding Ninjas". Taitenda kuti taifanira kuvandudza zvinhu zvedu kusvika tazoona kuti takanga tisina kumira zvakanaka pamusika, uye taifanira kugadziridza kuti tibude pachena.
Pakanga paine shanduko huru mubhizinesi redu - Makambani anogara achishanduka. Kana bhizinesi rako rachinja kana iwe wakanyatso gadzirisa yako yaunoda brand demographic uye uchida kupinda mairi zvinobudirira, rebranding ingave sarudzo. Tisati tachinjira kuLemon.io, takagadzira mamwe anobatika brand uye vatengi vanhu, izvo zvakazotibatsira kuita sarudzo dziri nani uye kurova nzvimbo dzakakodzera.
Tisati tave nemukurumbira -Isu takava nemukana wekuita rebranding tisati tave nemukurumbira pasi pezita rekare. Isu hatigone kuramba chokwadi chekuti njodzi dzine chekuita nekudzokororazve kuwedzera nekuwedzera kwemukurumbira. Usati wazivikanwa, njodzi dzakaderera sezvo vanhu vasingambo zviona.
Taiva nezvinhu zvakakwana - Rebranding isimba-yakawanda, saka zvakanaka kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingerwa.
Irini isiri nguva yakakodzera yekugadzira rebranding?
Rebranding haifanire kuitwa pasina chikonzero chakasimba. Iwe unoziva kuti kukurudzira kwako kwekugadzirisa zvakare hakuna kunaka kana zvichibva mumanzwiro kwete chokwadi.
Wakafinhwa neiyo logo dhizaini? Kubhowekana ndicho chikonzero chinotyisa chekudzokorora. Nekuda kwekuti iwe hausisiri kuwana iyo logo inoyevedza zvakakwana hazvireve kuti iwe unofanirwa kuichinja. Mutengo haukodzeri kubatsirwa.
Kana pasina chachinja musangano rako -Kana pasina shanduko yakakosha musangano rako, kugadzirazve rebranding hakuna maturo. Hapana chikonzero chekushandura hurongwa huri kutoshanda.
Nekuda kwekuti vakwikwidzi vako vari kuita zvekare - Hapana chikonzero chekuenda nechaunga. Sarudzo yako yekugadzira patsva inofanira kubva pane zvaunoda iwe pachako uye kunzwisisa kwako kwezvinangwa zvenguva refu uye pfungwa yakazara.
Rebranding semari yemangwana yebhizinesi rako
Icho chinhu chisingagoneki kuti pasinei nekushandiswa kwakakomba kwenguva uye zviwanikwa panguva yekugadziridza, rebranding inogara iri mari mune ramangwana. Mhedzisiro inoruramisa hustles dzese dzakabatanidzwa mukuita. Sezvatakamboratidza, nhamba dzinoratidza kuwedzera kukuru kwekutengesa mushure mekunge tachinja. Maitiro acho aive akanaka kune ese pasi pasi uye mufananidzo wedu wekambani.
Kukwanisa kugadziridza zvakare kunowedzera kushanda kwekambani kwese, kunosimudzira nzvimbo dzakajeka, kusimudzira misika mitsva nenzvimbo dzekuita.
Maitiro ekuisa chiratidzo kana rebranding ibasa rinoteresa rinoratidzwa neakawanda akakwira uye akaderera pane zvazvingaite kubva munhau yedu. Zvinoda kuronga zvine hungwaru, nguva chaiyo, uye zviwanikwa zvakakwana kuti uzvigadzirise uye ugadzire brand inonyatso kutaura, kunatsiridza mihoro yako uye kugadzirisa chimiro chako cheveruzhinji. Rebranding zvinoreva zvakare kuita mabhindauko ekufambirana nenguva.
Tags: advertising agency trade associationBPBDmuchisobrand mascotbrand persona yekutenga sarudzolemon.iolucidpressRebranding